Iindaba-Amabala esicelo se-Welding ezenzekelayo
Ngophuhliso loqoqosho, abantu baya ngokuxhomekeka kwimfuno yamandla. Ukuhamba kwemibhobho yindlela ebalulekileyo yokuhamba kwamandla. Kukhuselekile kwaye kunezoqoqosho kwaye ngenxa yoko kuye kwasetyenziswa ngokubanzi. Lo matshini iwelding oluzenzekelayo zingasetyenziswa ngokubanzi ukuwelda oluzenzekelayo imibhobho kumashishini ezahlukeneyo ezifana petroleum, igesi yendalo, ishishini imichiza, isikhululo samandla ombane, umzimba tank, ubunjineli zaselwandle, ubonelelo lwamanzi kunye nobunjineli yokuhambisa, ubunjineli thermal njalo njalo. Phakathi kwamacandelo amaninzi asebenzayo, owona mbhobho wokuhambisa ioyile kunye negesi ngokungathandabuzekiyo. Ke ngoko, izixhobo ezizenzekelayo zentsimbi kufuneka zisekwe ekubeni zinokulungiswa ngokugqibeleleyo kwiimfuno zokuwelda kweoyile kunye nemibhobho yegesi njengomgangatho wokuzihlola.
Ngokusetyenziswa ngokubanzi kunye nokukhuthazwa kombhobho wokuzenzekelayo we-welding kwi-oyile kunye nakwimibhobho yegesi yendalo, kwaye ngexesha elifanayo, ukwakhiwa kwemibhobho ineemfuno eziphezulu nangaphezulu zokumelana nomgangatho wokungqinelana, kunzima nakakhulu ukuqeqesha i-welders yemveli. Umbhobho ukuwelda okuzenzekelayo kunciphisa amandla okuwelda kwabasebenzi kwaye kuhlakule ixesha lewelders. Imfutshane, inkqubo yesiza ye-welding ezenzekelayo yenziwa kakuhle, kwaye ukusebenza kwe-welding kungcono. I-China lilizwe elinendawo enzima kakhulu. Inani elikhulu lezixeko ezinabemi zihlala kwiinduli ezisemazantsi kunye neentaba kunye neendawo zonxibelelwano zamanzi, kwaye kukho imfuno engaphezulu yokuhamba kwemibhobho yegesi yendalo. Zininzi, ke izixhobo ezizenzekelayo zokufakelwa umbhobho ezifanelekileyo kumhlaba ontsonkothileyo ziyimfuneko kakhulu.
Ukudibanisa iimpawu zethambeka elikhulu lentaba, icandelo lothungelwano lwamanzi kunye nendawo yesikhululo esinendawo yokusebenza ethintelweyo, iTianjin Yixin ngokudibanisa yonke indawo yokubeka umatshini wokuzenzekelayo, kwaye yenze ubungakanani obuncinci, umsebenzi onamandla ngakumbi, kunye nomgangatho wokuqina we-welding . Isisombululo senkqubo yezixhobo sihlangabezana neemfuno zemibhobho yokusebenza kwe-welding ngokuzenzekelayo kwiindawo ezintsonkothileyo zokwakha.
Kutshanje, ndikhangele ingxelo yophando yengozi yokuqhushumba kwemibhobho kwicandelo leDolophu yaseShazi yeQinglong County, Qinglong County, Qianxinan Prefecture yombhobho wegesi wase China-Myanmar nge-10 kaJuni 2018. Ingozi ibangele ukusweleka kwe-1 kunye nokulimala okungama-23, kunye nelahleko ethe ngqo yezoqoqosho ye-21.45 yezigidi zeerandi.
Ingozi ibangelwe kukuqhekeka kancinci kwentsimbi ye-girth weld, ebangele ukuba isixa esikhulu segesi yendalo kumbhobho ukuvuza kwaye kuxutywe nomoya ukwenza umxube wokuqhuma. Ukungqubana okunamandla phakathi kwesixa esikhulu segesi yendalo kunye nokwahlukana kombhobho kubangele umbane ongashukumiyo ukuba ubangele ukutshisa kunye nokudubula. Unobangela ophambili wengozi kukuba umgangatho wesinyithi esizeni awuzange uhlangabezane neemfuno zemigangatho efanelekileyo, ebangele ukuba kwaphuke ukonakala kwe-girth weld phantsi komthwalo odibeneyo. Izinto ezibangela iingxaki kumgangatho weentsimbi zokubamba zibandakanya iinkqubo zewelding ze-lax zemibhobho yentsimbi ye-X80 esizeni, iimfuno eziphantsi zemigangatho yovavanyo engonakalisi kwindawo, kunye nolawulo lomgangatho wolwakhiwo. I-welding semi-automatic + i-welding yesandla isetyenziselwa ukufakela imibhobho yegesi yendalo kumgca we-China-Myanmar. I-welding ezizodwa eziqeshwe ziikontrakta zewelding zengozi ziye zakha izatifikethi zomqhubi okhethekileyo. Unobangela kunye neziphumo zengozi ziyothusa.
Umbhobho welding oluzenzekelayo ngokubanzi isebenzisa imisebenzi enkulu-isikali flow, ukuzalisa nokugubungela welding kugqitywa ngokuzenzekelayo, eqinisekisa ukungqinelana umgangatho iwelding kuthelekiswa manual, ngaloo ndlela kuqinisekisa umgangatho weld, kunye nokubonelela ngesiqinisekiso esisiseko ukhuseleko ixesha elide ukusebenza kombhobho.